Xeer Ilaaliye Jeff Sessions oo Is-casilay
Thursday November 08, 2018 - 10:23:00 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweynaha Maraykanka D. Trump ayaa Arbacadii shalay xilkii ka qaaday Xeer Ilaaliyihii Guud ee Maraykanka Jeff Session. Talaabadan ayaa xisbiga Dimoqraadigu ay uga digeen inuu ku joojiyo baarista Robert Mulleur oo ah ninka baaraya xiriirka lagayaab
Madaxweynaha Maraykanka D. Trump ayaa Arbacadii shalay xilkii ka qaaday Xeer Ilaaliyihii Guud ee Maraykanka Jeff Session. Talaabadan ayaa xisbiga Dimoqraadigu ay uga digeen inuu ku joojiyo baarista Robert Mulleur oo ah ninka baaraya xiriirka lagayaabo inuu u dhexeeyey ololaha Trump iyo dawladda Ruushka. Madaxweyne Trump ayaa dhiniciisa, fariin twitter ah oo uu soo diray, ku shaaciyey tagista Sessions, isla markaana u mahad celiyey, isaga oo sheegay in xiliga soo socda la magacaabi doono qof si joogta ah xilka u qabta.
Haddaba xiliga ay is casilaadani ku soo beegantay, iyo sida laga yaabo in baarista Mulleur ay u saameyso ayaa Maxamed Cabdi Sandhere uu ka wareystay Garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka hawlgala gobolka MN. VOASOMALI KA DHAGEYSO